Uhlalutyo lwamaxabiso e-Nasdaq 100-ngoFebruwari 12
Ukuhlaziywa: 12 Februwari 2021
Ixesha elizayo lokulandelela ii-indexes ezinkulu ze-equity zawa kwangoko ngolwesiHlanu, njengoko iWall Street yayijongeka ngathi iyakujikeleza iveki ngeenzuzo ezifanelekileyo.
Ngexesha lokushicilela, I-Nasdaq 100 (NDX) ikamva lalisezantsi nge -0.27%, ngelixa ikamva leDow Jones (DJIA) kunye ne-S & P 500 (SPX) yehla nge -0.28% kunye -0.34% ngokwahlukeneyo.
Okwangoku, izabelo zeDisney zonyuke ngaphezulu kwe-2% kwiiyure zokurhweba ezandisiweyo, kulandela ingxelo engcono yokufumana umvuzo kwikota yokuqala yonyaka-mali ka-2021. I-behemoth yolonwabo ityhile ukuba ngoku inabarhwebi abahlawulwayo abazizigidi ezingama-95 kwiDisney yayo. inkonzo yokuhambisa.
Nangona umfutho ophucukileyo kaFebruwari obonwe eWall Street uqalisa ukuncipha, izalathiso eziphambili zisalungele ukuphela ngeveki ngenqaku elimnandi. Iimarike ze-equity zaqala ukuphulukana nomphunga oshushu njengoko abatyali mali bahlala benethemba lokuphinda kuvulwe uqoqosho ngokugudileyo kunye nokusasazwa kovuselelo lweCovid.
UBrad McMillan, iGosa eliyiNtloko loTyalo mali kwiCommonwealth Financial Network, kutsha nje "Phakathi kokuphucuka okuqhubekayo kwezonyango nakwezoqoqosho, iimarike ziyaqhubeka nokulindela okungcono ngo-2021, kwaye oko kuxhase amaxabiso." Wongeze watsho "Ingeniso yekota yesine iza kakuhle ngaphambi kokulindelweyo, kwaye abahlalutyi ngoku bahlengahlengisa ingqikelelo yabo yengeniso engama-2021 ukuya phezulu."
Kwezinye iindaba, uMongameli uJoe Biden ubhengeze izolo ukuba ulawulo lwakhe lukhusele isivumelwano sezinye iidosi ezingama-200 zezitofu zeCovid-19 ezisuka eModerna (NASDAQ: MRNA) kunye nePfizer, nto leyo ebangela ukuba inani lokugonya lilonke lifike kwizigidi ezingama-600. Wongeze ukuba i-US kufuneka ibonelele ngesitofu sokugonya esoneleyo kuzo zonke i-300 yezigidi + zaseMelika ngasekupheleni kukaJulayi.
Itshathi yeYure nganye
I-Nasdaq 100 (NDX) yeXabiso lokuQikelela - ngoFebruwari 12
Amanqanaba okubonelela: 13770, 13800, kunye no-13850.
Amanqanaba okufuna: 13696, 13600, kunye no-13563.
I-NDX ibonakala ngathi ilahlekelwa ngumphunga oshushu, kulandela ukwaliwa kwayo okokugqibela ukusuka esiphelweni sesiteshi sethu esinyukayo. Ukwalelwa kuthumele isalathiso sobunzima-obunzima kwindawo ye-13500, apho abathengi abangakumbi beediphu beza kukhwela kwaye bathumela ixabiso kwindawo ye-13700, berekhoda ukulungiswa okunempilo.
Oko kwathethi, isalathiso sinokuphinda siqhubeke nentlawulo ye-bullish kwiveki ezayo, ngokuchasene ne-13850.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Nasdaq 100-ngoFebruwari 9
IWall Street ithengise ngesantya esiphezulu njengoko abatyali zimali bekhukula amasheya amandla kwaye bexabisa kolunye ujikelezo lwenkcitho yenkxaso evela eWashington.
The I-Nasdaq 100 (NDX) inyuke nge-0.67% izolo ukurekhoda ixesha elipheleleyo lonke ixesha elijikeleze i-13696. I-Dow Jones (i-DJIA) kunye ne-S & P 500 (i-SPX) ikwarekhodile ii-ATHs ezintsha nge + 0.76% kunye ne-0.74% ngokwahlukeneyo.
IWall Street iqale iveki ngeenzuzo ezomeleleyo ezikhokelwa licandelo lezamandla, ingxelo engcono yomvuzo, kunye nolindelo lomnye umjikelo woncedo lwezemali.
Iidemokhrasi kwi-US Congress kutshanje ziqalise inkqubo eza kuvumela iSenethi ukuba idlule kwiRiphabhlikhi kwaye ivote kwisicwangciso sokuhlangula sikaBiden, kwinkqubo eyaziwa njengoxolelwaniso lohlahlo-lwabiwo mali.
Ngelixa kungathandeki ukuba yonke i-1.9 yezigidigidi zeedola iya kudlula, abahlalutyi balindele ukuba isenokuba sisixa esikhulu. Kwiveki ephelileyo iingxelo zomsebenzi ezimbi kakhulu kunokuba bekulindelwe ziya kuthi zikhulise amathuba enkcitho enkulu.
Ngeli xesha, uNobhala weSebe lezeMali uJanet Yellen uthe ngeCawa icebo likaBiden linganceda ukuququzelela ukukhula koqoqosho olomeleleyo ukubuyisela i-US kwingqesho epheleleyo kunyaka olandelayo.
I-Reuters inike ingxelo yokuba uncedo lwezemali oluvela kwiidemokhrasi kulindeleke ukuba lubandakanye malunga ne-50 yeebhiliyoni zeedola kwinkxaso-mali eyongezelelweyo yeenqwelo moya zase-US, iinkqubo zokuhamba, izikhululo zeenqwelo moya, kunye nomgaqo kaloliwe wabakhweli i-Amtrak, kunye nenkqubo entsha yeebhiliyoni ezi-3 zeedola ukunceda abavelisi beenqwelomoya ngeendleko zemivuzo.
I-Nasdaq 100 (NDX) yeXabiso lokuQikelela - ngoFebruwari 9
Amanqanaba okubonelela: 13696, 13750, kunye no-13800.
Amanqanaba okufuna: 13600, 13563, kunye no-13450.
I-NDX ibinokuqhuba okunyusayo kakhulu izolo, ukurekhoda i-ATH entsha nge-13696. Akumangalisi ukuba isalathiso sizabalaze ngokunyuka ukusuka kwinqanaba le-ATH kuthathelwa ingqalelo ukuba sibalekele esiphelweni sesiteshi sethu esinyukayo. Oko kwathethi, isalathiso kufuneka siphinde siqhubeke kwintengiso namhlanje ngomfutho oqinileyo wokuyinceda ukuba iphule ngaphezulu komjelo okanye umngcipheko wokuncipha kunye nokubuyela kwindawo ye-13600-563 kwiiyure nakwiintsuku ezizayo.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Nasdaq 100-ngoFebruwari 5
Ukulandelela ikamva I-Nasdaq 100 (NDX) kunye ne-S & P 500 (i-SPX) ibone amanani aphakamileyo ngolwe-Sihlanu, nanjengoko abatyali mali abasemngciphekweni belindele ingxelo yemisebenzi elungileyo ukuqinisekisa ukuba eyona ngxaki yentengiso yabasebenzi iphelile, ecaleni kukhuthazo lwezoqoqosho.
ISebe lezabaSebenzi kungenzeka ukuba linike ingxelo yokuba uqoqosho lwaseMelika lukhule ngemisebenzi engama-50k ngoJanuwari, kulandela ilahleko ye-140k ngoDisemba. Ukuqokelelwa okuhle kwamanani omsebenzi ngoJanuwari kusenokwenzeka ukuba kubangelwe kukunciphisa izithintelo zokutshixeka kwi-US iphela.
Nangona kunjalo, ingxelo entle yemisebenzi ayisiphelisi isidingo soncedo olongezelelweyo lukarhulumente, njengoko ixesha elide lokungaqeshwa lisabonakala lilusizi.
Isiluleko sikaMongameli uJoe Biden esicetywayo se-1.9 yezigidi zezigidi zeerandi sokukhawulezisa sikhawulezise kwangoko namhlanje, njengoko iNdlu yeeNgwevu yase-US ivume isicwangciso sohlahlo-lwabiwo mali esibandakanya ukuhanjiswa komthetho osayilwayo kwiiveki ezizayo.
Isalathiso sobunzima-obunzima sisetelwe ukurekhoda eyona veki ibalaseleyo ukusukela kunyulo lwase-US ngo-Novemba, njengoko umvuzo kunye nedatha yezoqoqosho inyuse ithemba ekuvuseleleni ngokukhawuleza koqoqosho. Ngeli xesha, ukuthengisa okuthengisayo kwiveki ephelileyo kubonakala ngathi kuyaphela, kubangela ukwehla kwe-80% kwisitokhwe seMidlaloStop (GME).
Iingxelo ezingcono kunoko bekulindelwe kwimivuzo yenkampani ukuza kuthi ga ngoku kwikota yesine iqinise ulindelo lwabacebisi malunga nemeko yomngcipheko wentengiso kwiintsuku nakwiiveki ezizayo.
I-Nasdaq 100 (NDX) yeXabiso lokuQikelela - ngoFebruwari 5
Amanqanaba okubonelela: 13650, 13700, kunye no-13750.
Amanqanaba okufuna: 13500, 13450, kunye no-13400.
I-Nasdaq 100 ikwi-rally enobundlongondlongo, kunye nesalathiso esaphule uxinzelelo olubalulekileyo lwe-13600 kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo (idatha yangaphambi kwentengiso). Oko kwathethi, silindele ukuba le rally yangoku izise i-NDX kwindawo yamaxabiso ayi-13650 (umphezulu wesiteshi sethu esinyukayo) kwiiyure ezizayo.
Kananjalo, sinokubona ikhefu ngaphezulu komjelo oxhaphakileyo onikezwe amandla okhoyo kwimarike. Nangona kunjalo, nakuphi na ukuwa kwinqanaba elikhoyo kufuneka kugxothwe kakhulu yinkxaso ye-13450 okwangoku.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Nasdaq 100-ngoFebruwari 2
The I-Nasdaq 100 (NDX) kurekhodwe ukunyuka kwe-2.65% izolo, ukuphinda ubuyisele uninzi lweelahleko obufumene kwiveki ephelileyo. Nangona amanyathelo entengo asenokubonakala kwiintengiso zabathengisi abatsha abanjengeGameStop kunye neAMC, ukwehla okubonakalayo kwenzala emfutshane ejikeleze ezi stock kubeke iimarike kwindawo eyahlukileyo xa kuthelekiswa neveki ephelileyo.
UGoldman Sachs uxele ukuba iihedge fund zithengile zaza zathengisa elona nani likhulu lezitokhwe ezakha zabonwa kule minyaka ilishumi idlulileyo kwiveki ephelileyo. "Ukuthatha imali eninzi" ukusukela ngoFebruwari ka-2009 "Izitokhwe ezibomvu" Kunzima kubarhwebi abathengisayo, imali eninzi esecaleni inokunceda izalathiso ezibanzi.
Kwezinye iindaba, iiDemokhrasi kwiNdlu nakwiNdlu yeeNgwevu zifake isigqibo sokudibanisa uhlahlo-lwabiwo mali kumagumbi abo izolo, ezakucacisa indlela yokuba uMongameli uJoe Biden aphumelele isindululo semali eyilwayo ye-1.9 yezigidi zeerandi.
Phambi kwangoku, uMongameli Biden wayenethemba lokudlulisa umthetho oyilwayo wokudibana kunye nokudibana neqela lamaSenator angama-Riphabhlikhi ukuze axoxe ngezindululo zawo zeedola ezingama-600. Nangona kunjalo, ngeedemokhrasi ezininzi ziyala inkqubo encinci yovuselelo, uLawulo lweBiden luya kuthi luqhubele phambili ngaphandle kwemvume yamaRiphabhlikhi kwiipakeji ze-1.9 yezigidi zeedola.
Oko kwathethileyo, amanyathelo okonyusa ongezelelweyo aya kuyomeleza i-NDX kunye nezinye izikhombisi kwiiveki ezizayo.
I-Nasdaq 100 (NDX) yeXabiso lokuQikelela - ngoFebruwari 2
Amanqanaba okubonelela: 13400, 13500, kunye no-13563.
Amanqanaba okufuna: 13200, 13110, kunye no-13000.
Ukulandela ukuvela kwepateni ephezulu kunye neReddit yokuthengisa ukunganyanzeleki kwintengiso, i-NDX yehle kakhulu ngaphezulu kwe-4% kwiveki ephelileyo. Nangona kunjalo, isalathiso siye safumana uninzi lweelahleko, + iipesenti ezi-3, kwingozi yamva nje.
Oko kwathethi, silindele ukubuyela umva ngokupheleleyo ekuchaseni kwe-13400 ngaphambi kokuvalwa kweemarike namhlanje, kulandele umzamo kwi-13563 kule veki.
Kwiphepha le-flip, nakuphi na ukuhla kwinqanaba lexabiso le-NDX langoku kuya kugxothwa ngamandla yinkxaso ye-13110, apho isiseko sejelo lethu elinyukayo lilele khona.
tags I-Nasdaq 100, NDX, Ezintsha
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Nasdaq 100-nge-29 kaJanuwari
IWall Street ithengise ngohlobo oluxubeneyo ngoLwesine njengoko abatyali zimali befumana iingxelo ezivela kwimivuzo yakutshanje kunye neempawu zokuba ukufakwa okukhulu kwisitokhwe esifutshane kuya kuqhubeka okwexeshana.
The I-Nasdaq 100 (NDX) kurekhodwe i-1.5% yeqa ukuxhathisa kwe-13400 ngaphambi kokulahla kwinqanaba layo elivulekileyo, okanye i-0.68% ejikeleze i-13200 xa kuvalwa imarike izolo.
Okwangoku, izabelo zase-US zirekhode okona kuncipha kwabo kubukhali ngaphezulu kweenyanga ezintathu ngoLwesithathu phakathi kokudityaniswa okulungelelanisiweyo ngabarhwebi abathengisa ngemali yeheji ebambe izikhundla ezimfutshane kwizitokhwe ezinje ngeGameStop (NYSE: GME).
Le ngxuba kaxaka yemarike yabangela ukuba abanye abatyali mali bafune indawo yokubalekela kwidola yaseMelika, njengoko isivuno seminyaka eli-10 se-US Treasury bond sasicaba.
U-Ned Rumpeltin, iNtloko yase-Europe yeQhinga lezeMali kwi-TD Securities, wathi ezo ntengiso “Linuka igazi.” Uye waphawula ukuba abatyali mali bahlala ecaleni ngolwe-Lwesithathu phambi kwengxelo ye-US Federal Reserve. Ukholelwa ukuba uninzi lwabatyali mali kufuneka beze ebhodini ngoku ukuba lo msitho ungaphambili.
URumpeltin wongeze ukuba abathengisi banokuphenjelelwa ukuba benze imali kwiimali zabo njengoko sisiya kwimpelaveki.
Kwezinye iindaba, iingxelo zengeniso zibangelwe yiAmerican Airlines (NASDAQ: AAL), Mastercard (NYSE: MA), Mcdonalds (NYSE: MCD), Dow Chemicals (NYSE: DOW), JetBlue Airways (NASDAQ: JBLU), Amazon (NASDAQ : AMZN), iMondelez (NASDAQ: MDLZ), kunye neVisa (NYSE: V).
I-Nasdaq 100 (NDX) yeXabiso lokuQikelela - nge-29 kaJanuwari
I-NDX enkulu ye-Bias: Ukukhupha
Amanqanaba okubonelela: 13300, 13400, kunye no-13500.
Amanqanaba okufuna: 13110, 13000, kunye no-12900.
I-NDX ibonakala ngathi iye kwi-bearish yaya esiphelweni esisezantsi kwendlela yethu enyukayo ejikeleze amanani ayi-13000 ajikelezayo. Ukwehla okucingelwayo kuqinisekiswa ngokwenziwa kwepateni ephezulu kabini kukumelana ne-13400. Silindele ukubona isaphulelo esifanelekileyo esivela kwi-13000 yenkxaso kwiiyure nakwiintsuku ezizayo.
Oko kwathiwa, ukwehla okuzinzileyo ukusuka kwi-13000 yengqondo kufanele kugxothwe ngokufanelekileyo yi-12900.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Nasdaq 100-nge-26 kaJanuwari
IWall Street ibone ukuqala kwiveki entsha ngoMvulo, kuseta ithoni yokufumana umvuzo wekota oxakekileyo, intlanganiso yeFed, kunye neveki ye-GDP engaphambili.
The I-Nasdaq 100 (NDX) kuthengiswa ngokungachananga ukuvala usuku kwi-0.87% yenzuzo emva kokubeka irekhodi elitsha kwi-13563.70. I-Dow Jones (i-DJIA) kunye ne-S & P 500 ivaliwe izolo ngeenzuzo ezifanelekileyo, nge-0.1% kunye ne-0.36% ngokwahlukeneyo.
Oko kwathiwa, abatyali mali bajonge iingxelo zekota ezivela kwiinkampani ezinkulu zeetekhnoloji ezinje ngeApple (NASDAQ: AAPL), iTesla (NASDAQ: TSLA), kunye neFacebook (NASDAQ: FB), zonke zilindeleke ngomso. Umzi mveliso wezobuchwephesha wabona ukuqhuma kwindyikitya yokufa ye-COVID-19, kulandela inkqubela phambili yokuhlala ekhaya, eyomeleza iindlela ezininzi zobuchwephesha.
Okwangoku, amaxabiso esitokhwe omthengisi wevidiyo yomdlalo wegeyimuStop (NYSE: GME) ibone enye into izolo, emva kwe-rally ye-51% ngolwesiHlanu ukuyishiya ngaphezulu kwe-240% kule nyanga iyodwa.
Ukuqhubela phambili, ibhanki esembindini (iFederal Reserve) izakuhlaziya umgaqo-nkqubo wayo ngoLwesithathu, kwaye ukufundwa kokuqala kokukhula koqoqosho (GDP) kwiQ4 kuya kukhutshwa ngoLwesine. Le datha iza emva kweveki ezaliswe ngumsebenzi, njengoko kungekho zinkampani zingaphantsi kwe-118 eziza kupapasha umvuzo wazo wekota kule veki, abatyali mali befuna iindlela zokuxhasa amaxabiso anyukayo ngokuchasene nengeniso yecandelo kunye nengeniso.
I-Nasdaq 100 (NDX) yeXabiso lokuQikelela - nge-26 kaJanuwari
Amanqanaba okubonelela: 13500, 13563, kunye no-13600.
Amanqanaba okufuna: 13300, 13200, kunye no-13110.
I-NAS100 ibineseshoni eguqukayo izolo, irekhoda ixesha lonke eliphakamileyo kunye neentsuku ezine eziphantsi kwisithuba seeyure ezimbalwa. Isalathiso saphuma kwisitishi sethu esinyukayo ukurekhoda phezulu kwi-13563.7 ngaphambi kokuba yehle kabukhali kwinkxaso ye-13200 kwaye kwangoko ibuyise uzinzo ngaphezulu kwe-13400.
Indlela encinci yokuxhathisa, okwangoku, ithambekele phezulu, oko kuthetha ukuba i-NDX inokunyuka ibuyele kwi-ATH yayo kwaye inyuke ngokukhawuleza. Oko kwathethi, silindele ukubona intshukumo ethe kratya kwiintsuku ezizayo, ngenxa yomsitho ogcweleyo kule veki.
I-Nasdaq i-100 yeNkokeli yeNdonga yeSitalato, njengoko iBiden ingena eMandleni
IWall Street yarekhoda inzuzo ebalulekileyo ngobusuku nje obunye njengoko uMongameli uJoe Biden wangena kumandla ephucula amathuba okonyusa amanyathelo ezemali kunye neminye imisebenzi kurhulumente yokulwa iziphumo ezibi zobhubhane we-coronavirus.
Ngaphambi koku, uNobhala weNondyebo otyunjiweyo uJanet Yellen uvakalise inkxaso yakhe kumongameli omtsha we-1.9 yezigidi zeerandi kwisicwangciso sokuchitha imali kunye nokuchasana nokunyuka kwerhafu, okunokubangela iintlanganiso ezingaphezulu kwiimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo.
Ngelo xesha, i I-Nasdaq 100 (NDX) kukhokelele ezinye ii-indices ezinkulu zase-US kwirekhodi elitsha. Inzuzo yenkampani ye-S & P 500 (SPX) ibikhokelwa ziinkonzo zonxibelelwano (+ 3.6%), discretionary yabathengi (+ 2.3%), kunye namacandelo obuchwephesha bolwazi (+ 2%).
I-NDX inyuke nge-2.3% yokurekhoda ixesha elipheleleyo lonke eli-13433, ekhokelwa yiAlfabhethi (NASDAQ: GOOG) (+ 5.36%), iAmazon (NASDAQ: AMZN) (+ 4.57%), kunye neMicrosoft (NASDAQ: I-MSFT) (+ 3.65%). Okwangoku, iNetflix (NASDAQ: NFLX) yayiyeyona nzuzo inkulu nge-16% yokutsiba emva kokunika ingxelo ngokukhula okukhulu kwababhalisi kunye nokwabelana ngezicwangciso zokubuyisa kwingxelo yabo yokufumana.
Iinkampani zaseWall Street ziyaqhubeka nokuthumela iingxelo zengeniso, kunye neenkampani ezili-12 kwezili-13 ze-S & P 500 ezigqithe uqikelelo lweemarike. Oko kwathethi, iingxelo ezilandelayo kulindeleke ukuba zingene ngenani elinomtsalane, ekufuneka ligcine imeko yentengiso okwexeshana.
I-Nasdaq 100 (NDX) yeXabiso lokuQikelela - nge-22 kaJanuwari
Amanqanaba okubonelela: 13434, 13500, kunye no-13600.
Ukulandela ukwehla kutsha nje kwisiphelo esisezantsi sesiteshi sethu esinyukayo e-12793, i-NDX ibone ukubuyela umva okungazange kwenzeke ngaphambili kwisiphelo sesiteshi, ukurekhoda i-ATH entsha kwi-13433.69. Oko kwathethi, silindele ukubona ukulungiswa kwiiyure ezizayo ngezantsi kwenkxaso ye-13300, ubuncinci.
Ngaphaya koko, i-MACD yethu yeyure ibonisa ukuba isalathiso ngoku sikummandla ogqithisileyo, kwaye ukulungiswa okuthobekileyo kufuneka kube kufutshane nekona.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Nasdaq 100-nge-19 kaJanuwari
Ixesha lokufumana i-Q4 lisondele, kwaye iifemu ezininzi zaseWall Street zimiselwe ukunika ingxelo yazo kule veki. Kwiveki ezayo, iibhanki ezinkulu zaseMelika kunye nezitokhwe ze-FAANG (i-Facebook, iApple, iAmazon, iNetflix, kunye noGoogle) bebefanele ukuba bayilahlile ingxelo yabo yomvuzo, ekulindeleke ukuba inyikime izinto zeNasdaq 100 (NDX), S&P 500 (SPX ), Kunye neDow Jones (DJIA).
Abatyalomali baya kujonga kwiinkcukacha ezisisiseko zokuvavanya ukusebenza kweNkampani yaseMelika ebusika xa igagasi lesibini le-coronavirus libetha kuqoqosho.
Oko kwathiwa, abahlalutyi banethemba kakhulu malunga nokufunyanwa kwe-Q4, ngoqikelelo lwe-EPS yekota ukuya kwi -8.8% ukusuka kwi -12.7% ebhalwe ukuphela kukaSeptemba 2020.
Kwezinye iindaba, ngaphandle kweziphepho ezixhaphakileyo, isindululo se-1.9 seetriliyoni esikhuthazayo sika-Mongameli-onyuliweyo uJoe Biden sokunciphisa isiphumo seengxaki zezoqoqosho ezibangelwe yintsholongwane kuqinise ithemba lokuhla. Ukukhutshwa ngokuthe ngcembe kwezitofu ze-COVID-19 kwihlabathi liphela kunokukhawulezisa ukubuyiselwa koqoqosho lwehlabathi kunye nokuqhelaniswa kwemisebenzi yeshishini kwixesha eliphakathi.
Okwangoku, isiseko sesinyithi kunye nexabiso leoyile ekrwada inyuke yaya kwiinyanga ezininzi, iseta imeko entle yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Icandelo elinxibelelene namandla, izixhobo, ezezimali, kunye necandelo lezorhwebo zonke bezikwindlela ephezulu ukusukela esiphelweni sonyaka ophelileyo, zisandisa ukujikeleza kwecandelo kumzi mveliso weetekhnoloji.
I-Nasdaq 100 (NDX) yeXabiso lokuQikelela - nge-19 kaJanuwari
Amanqanaba okubonelela: 12900, 12966, kunye no-13000.
Amanqanaba okufuna: 12793, 12650, kunye no-12500.
I-NDX isandula ukubona ulungiso olukhulu kwinkxaso ye-12793.00 kwaye ibethe isiseko sesiteshi sethu esinyukayo, ibonisa ukuba sinokubona ukubuyela okuqinileyo kwindawo ephezulu ye-13000 kwiiyure nakwiintsuku ezizayo, njengoko intengiso iqala kwakhona impelaveki kunye neholide kawonke-wonke. Oko kwathiwa, ukuxhathisa kwe-12966.00 kunokubonakalisa i-nut enzima ukuba iqhekeke kwaye inokumisa ukunyuka kwe-NAS100 okwangoku.
Amaxabiso e-Nasdaq ali-100 anokuthi awe njenge-Ofisi kaMongameli we-Biden ebeka esichengeni ukonyusa amandla kunye neerhafu
Isibhengezo samva nje sokuba uMongameli-onyuliweyo uJoe Biden uthathela ingqalelo i-1.9 yezigidigidi zeedola iphakheji yokukhuthaza isuswe amandla kwi-Nasdaq 100 (NDX) enobunzima, ubuncinci kwixesha elikufutshane.
Isalathiso siwile malunga neepesenti ezi-2 ukusuka kumaxesha asandula ukubakho nge-13110 nge-8 kaJanuwari, njengoko kunokwenzeka ukuba amanyathelo okonyusa ongezelelweyo athumela isivuno sebhondi ephezulu kwaye inokuthintela ukujikeleza kwecandelo ukusuka kubuchwephesha ukuya kubukho bokukhula.
Ibhilidi yoncedo ka-Biden yenza indawo eyongezelelweyo yeedola ezili-1,400 kwiintlawulo ezithe ngqo kubantu abaninzi base-US, ukwanda kwezibonelelo zokungaqeshwa, inkxaso-mali kurhulumente noorhulumente basekhaya, kunye nenkcitho eyongezelelweyo yokunyusa ukuhanjiswa kwezitofu zecoronavirus.
Okwangoku, imeko ka-Biden kunyuko lwerhafu ikongeze ubuthathaka be-NDX kutshanje, njengoko eyiphindayo loo nto "Apho senza khona utyalomali olusisigxina, njengoko benditshilo kwiphulo, sizakubabhatalela ngokuqinisekisa ukuba wonke umntu uhlawula isabelo sakhe serhafu." Umongameli okhethiweyo onomdla wongeze ukuba uceba ukwenza oku "Ukuvala imingxunya yerhafu kwiinkampani ezithumela imisebenzi yaseMelika phesheya kolwandle okanye evumela iinkampani zaseMelika ukuba zihlawule irhafu kwirhafu yengeniso."
Nangona kunjalo, iiRephabliki zeSenate ziya kuthi zingqine umthi onzima wokuqhekeka kunye nokuthintela le migaqo-nkqubo icetywayo ekubeni ipasiswe. Nangona kunjalo, iiDemokhrasi zinokuwudlula lo mqobo ngokucela inkqubo yoxolelwaniso lohlahlo-lwabiwo mali ukuba idlulise imicimbi yerhafu kunye nemicimbi yezemali ubukhulu becala. Njengoko sisazi, iiDems okwangoku zibambe amandla ngakumbi kunamaRiphabhlikhi aseWashington, nekufanele ukuba zilungele injongo yazo.
Oko kwathiwa, ukubakho kokunyuka kwetax kunye nokunyuka kwesivuno sebhondi kungathintela naziphi na izibonelelo ezibalulekileyo ze-NAS100 kwixesha elikufutshane.
I-Nasdaq 100 (NDX) yeXabiso lokuQikelela - nge-15 kaJanuwari
I-NDX enkulu ye-Bias: Iindlela
Amanqanaba okubonelela: 13000, 13100, kunye no-13200.
Amanqanaba okufuna: 12830, 12793, kunye no-12650.
Ngezinto ezisisiseko ezijikeleze i-NDX, akunakulindeleka ukuba sibone ukubuyela kwi-ATH ngo-13110 ngalo naliphi na ixesha kungekudala. Nangona kunjalo, ithemba lokuqhubeka kwecala elisezantsi libonakala linqabile ngeli xesha. Oko kwathethi, i-Nasdaq 100 inokuthi ihlale iphakathi kwe-13000 kunye ne-12800 okwangoku. Kuya kufuneka silindele ukubona idiphu ephantsi ukuya kwi-12800 esezantsi kwiiyure ezizayo.